Waalidiinta ku Nool Dalka Britain oo caruurtooda ku soo celinaya Soomaaliya. – Kismaayo24 News Agency
by Mohamed Abdirashid Abaajo 10th March 2019 078
Dhowr iyo toban jiro heeysta dhalashadda Dalka Britain balse asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya ayaa waalidiintood waxa ay usoo direen Soomaaliya, oo hadda kasoo kabaneeysa Dagaaladda, Colaadaha iyo Weeradda aan cidna u aabayeelin ee Al-shabaab.
Waliidiinta caruurta ayaa ogaaday in booliiska Ingiriisku uusan ilmahooda ka difaaci karin dambiga midida lagu geeysto, sida uu baahiyay Wargeeysta the Guardian ee Inrigiiska kasoo baxa.
Wakiilo matala Soomaalida Woqooyiga London ayaa sheegay in boqolaal caruur ah loo soo duuliyay Soomaaliya, Soomaaliland iyo Kenya sababtoo ah in ay soo bateen kooxaha Abaabulan ee toorreeyda wax ku dila iyo kuwa caruurta u kala gudbiya magaaloyinka Ingiriiska
Wareeysi laga qaday hooyooyin Soomaaliyeed oo London degan ayaa waxaa ay the Observer ugu sheegeen in caruurtoodu ay weeydiisteen in ay Soomaaliya soo aadan, daroogada iyo khatarta dilalka dartood.
Raaqiya Ismaaciil oo ah ku xigeen duqa ee Islington ayaa sheegtay “in caruurta la wado waa wadada kaliya ee ay ku badbaadi karaan. Arrinta badbaadada bulshadu waa ay ku cel-celiyeen laakiin cidna kama dhageeysan”.
Waxaa ay hadalkeeda ku dartay in ilmo Soomaliya laga celiyay Labo todobaad ka hor Toorreey lagu dilay labo maalin kadib markii uu London ku laabtay.
Bulshadda Soomaaliyeed ee Ingiriiska ayaa ku cel celiyay cabashadooda ku aadan dhibka ay caruurtooda kala kulmaan kooxaha Torreeyda ku hubeeysan.
Fadaralisamka iyo dhisida Maamulka Gobolada dhexe oo Muqdisho loga tashtay.
Wafdi ka socda Caalamka oo kismaayo garay
admin 22nd February 2016 22nd February 2016
Dowladda Jarmalka oo Ku dhawaaqday ineey Ciidamo nabad ilaalin ah u direyso wadanka Maali.